Abashayeli uhlose ukushintsha uhlobo imoto, ufunde emakethe imoto kanye umbono nabanye abanikazi imoto mayelana onobuhle ahlukahlukene. Ngaphezu yasekhaya, ukukhetha nabacebileyo izimoto angaphandle. Ngokwesibonelo, idumela kufanele ezinhle Nissan Teana, ukubuyekezwa okuyinto kuphela ukukhonza njengobufakazi bokuthi lokho.
Nissan Teana - 1 isizukulwane imoto, wabonakala ngo-2003. Ngemuva kweminyaka emihlanu ngesikhathi Beijing Motor Show yethulwa nguqulo ye isizukulwane sesibili, wadala Renault-Nissan D. platform uya emotweni eJapane nakwamanye amazwe: Thailand, South Korea, Taiwan. Imodeli ikhiqizwa sedan. Ground imvume ingenye namashumi amahlanu amamilimitha angu.
Imoto emelela e ukubukeka kwayo isitayela eyinkimbinkimbi, lokubonakala ifomu izibani zalo zokuqala, bushelelezi umzimba imigqa, ifaka-chrome. Ziyakwazi zikhanga esikhathini Nissan Teana izici ukuthi sihlanganise design zikanokusho kakhulu imishini yezobuchwepheshe.
Le nguqulo eqolo imodeli - "Premium" - kuhlanganisa cruise control, izihlalo zesikhumba, ama-airbag ezinhlanu, ionizer ekulawuleni isimo sezulu, on-ebhodini ikhompyutha. Izimoto ezintathu ziya Ushintshe CVT gearbox. Nissan Teana ongafinyelela ngesivinini kuze kufinyelele amabili neshumi km / h futhi. Injini yakhelwe amalitha amathathu nesigamu zikaphethiloli amandla izinqolobane zalo 249 amahhashi.
Abathengi ukukhetha imoto Nissan Teana, Izibuyekezo rave ushiye. Imoto ubizwa ngokuthi esikhulu, wayehlale enza lapho uqala nje ukubona kufanele uqobo. Thanda abashayeli khona uqinisekisa ukhululekile futhi ergonomic lesikhumba Upholstery, idizayini enhle. Lapho ushayela simaskwe, cishe ngeke wazizwa zonke uhlevane yomgwaqo. Imoto cornering ephawulekayo, inekhono kakhulu. Siyabonga ukuba ikhale ukwahlukanisa, awukwazi ukuzwa injini. Imoto ophethe kahle endleleni. Imoto libizwa ivulekile, ashukumisayo, kulula ukuphatha.
Ewufanele Nissan Teana Izibuyekezo nje kakhulu futhi ngoba ingaphakathi ivulekile, elula ezingemuva umbono ikhamera (kuyasiza lapho yokupaka), kagesi ukusonga izibuko. Ngaphezu kwalokho, imoto unesimiso esihle umsindo ungajabulisa iyiphi lover umculo.
Ukuze amakhasimende ezifuywayo luyimfanelo ebaluleke ukuthi imoto ukuthi Nissan Teana Kulula ukuqala nganoma iyiphi frost. Ukuze kududuza uqhathaniswa Mercedes. Abathengi ajabulela nge ukubukeka emotweni. Ubheka sibonga okuhle lungisani imigqa on the front Izinsimbi, ezinkulu Xenon headlamps futhi ezingemuva diodes. Abashayeli bathi Nissan Teana impendulo uhilela izenzo, phezu imoto ukonga kakhulu petrol uma ushayela edolobheni - kusuka amalitha eziyishumi nane uphethiloli. Yisishiyagalolunye amalitha uphethiloli edingekayo lapho ushayela emgwaqweni omkhulu.
Nissan ifakwe uhlelo lokuhamba, i ekulawuleni isimo sezulu esihle, izihlalo zayo ezinkulu futhi ukhululekile babe inkumbulo. abanikazi abaningi ukugcizelela esihlalweni ikakhulukazi ukhululekile umshayeli, lapho ungakhululeka. Abathengi abathenge imoto, walibiza ngokuthi i choice omuhle ngemindeni nezingane ngenxa umthwalo omkhulu walo gumbi angase afanelekele strollers kanye nezinye izinto.
Car Nissan Teana abanikazi imoto Izibuyekezo okukhulunywe umndeni, lapho has zonke Izinsiza ukuhamba nezingane. Abathengi ziyaneliswa ngokugcwele "yensimbi ihhashi" yakhe, okuyinto leze ududuze futhi nokwethenjelwa.
Abashayeli bathi izinga imoto enhle, isethi ephelele, handling ezinhle. Njengoba sinazo zonke lezi zici, kanye ukutholakala onobuhle ibhizinisi-class, umshini libizwa kukho okuhle ukusetshenziswa ezisemadolobheni.
Amafutha Pressure Shintsha 2110: isiqu, kuvetwa kwebalingisi, ukuliqaqa nokufakwa
Anna Snatkina: Filmography kanye nempilo yakho
Ingaziwa kancane epulazini amakhowe wesikhumba
Porcupine: uhlala kuphi, lokho akudlayo, indlela liphindaphindeke